Xiddigaha Geeska oo xilkii ka xayuubiyay Xasan Dhuxul
Home WARARKA Xiddigaha Geeska oo xilkii ka xayuubiyay Xasan Dhuxul
Hargeysa(Berberanews):- Guddiga Fulinta iyo Xubnaha Kooxda Fanka ee Xiddigaha Geeska, ayaa sheegay inay Xilkii ka qaadeen Guddoomiyihii Kooxdaas Xasan Saleebaan Dhuxul (Laab-saalax), ka dib markii ay ku eedeeyeen xil-gudasho la’an.
Waxaa sidaa lagu sheegay War-Saxaafadeed kooban oo ka soo baxay Caawa Guddiga Fulinta ee Kooxda Xiddigaha Geeska, kaas oo lagu sheegay in Guddiga Fulinta iyo Xubnaha Kooxda Xiddiguhu Shir ay isugu yimaaddeen Cod-gacan-taag ah kaga qaadeen Maanta xilka Abwaan Xasan Saleebaan Dhuxul.
Qoraalka War-Saxaafadeedkaas Xiddigaha Geeska, waxa uu u dhignaa sidatan:-
“Maanta oo ay bishu tahay 03 12 2017 shir ay isagu yimaaddeen Guddiga fulinta ee Kooxda Xiddigaha Geeska iyo Xubnaha Kooxdu waxay xilkii guddoomiyenimo ee kooxda cod gacan taag ah kaga qaadeen Guddoomiyihii hore ee kooxda Xiddigaha geeska Xasan Saleebaan Maxamed (Laab-saalax), ka dib markii uu gudan waayey waajibaadkii shaqo ee kooxdu u igmatay sida uu dhigayo sharciga Kooxdu.
Islmarkaa waxay kooxdu cod gacan taag ah ku sime gudoomiye ugu doorteen xoghayaha kooxda Maxamed Axmed Bakaal Cirro). ALLAA Mahad Leh.”
Previous articleMadaxweyne Biixi: Ma waxa uu dooran doonaa abaalgud Mise wuxuu eegi doonaa danta Qaranka
Next articleHannaanka Diiwaangelinta Xisbiyada Siyaasadeed oo ka bilaabmay Somalia